Nkata vidiyo Na-aga Mainstream Maka Weebụsaịtị Weebụ na nyiwe Ecommerce | Martech Zone
Salesforce bipụtara a ederede zuru ezu na infographic na mmetụta na omume kachasị mma nke nkata vidiyo maka ọrụ ndị ahịa. Onye ọrụ nlekọta ndị ahịa a na-agakọ mma nke nkata ndụ na oku ekwentị yana mmetụ onwe onye nke vidiyo. Site na bandwidth buru ibu, 5G na-agba gburugburu n'akụkụ, yana nkwalite dị ukwuu na teknụzụ nkwukọrịta vidiyo, obi abụọ adịghị ya na nkata vidiyo ga-eto na mmetụta. Gartner na-ekwu na ihe karịrị 100 nke 500 kasị ukwuu azụmahịa zuru ụwa ọnụ ga-ewebata nkata vidio dabeere na 2018 maka ndị ahịa na-eche ihu
Gịnị bụ mmetụta nke Video Chat na Ahịa?
Otu ụlọ ọrụ na-eji video nkata hụrụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na-azụ ahịa okpukpu iri na ọnụ ahịa, ego ha mefuru si kwa $ 10 ruo $ 100
Ihe nkata vidio na-enye ọtụtụ atụmatụ, dịka ịkekọrịta ihuenyo, nyocha, ndekọ, na nkata ederede; otu o si di, nke kachasi nma nwere ike ibu ikike mmadu ile anya na ibe ya iji wulite nmekorita nke oma n’otu n’otu. Uru ya akwụsịghị ebe ahụ. Na ikike iji n'ezie hụ ibe gị ma kesaa ihuenyo, nkata vidiyo ga-eme ka ụlọ ọrụ nwee ike iwepụ obere oge nyocha okwu na oge iji dozie ha. Nke ahụ, n’aka nke ya, na - ebute mmụba dị egwu na afọ ojuju ndị ahịa.
Salesforce eweputala a nhọrọ nkata vidiyo maka Health Cloud. Telehealth na-eme ka ndị ọkachamara ahụike jikọọ na ndị ọrịa site na vidiyo na gam akporo ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka iOS, yana nhọrọ ịkekọrịta ihuenyo. AppExchange na-enyekwa ụfọdụ azịza, gụnyere VeriShow, Okwu, Mbugharị, na Ilekiri. O doro anya na azịza ndị ọzọ ga - abịa - ọkachasị ugbu a na isi desktọọpụ na ihe nchọgharị ekwentị na - akwado ọdịyo na vidiyo.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, yana ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ iji melite ogo nke nkata vidiyo gị!
Tags: ịgbanweeikoriIlekirindị ahịainfographic ahịaihuenyo òkèOkwuVeriShowoku vidiyovideo nkatavideo nkwadombugharị
Etu aga - esi hazie ozi ịntanetị gị iji nweta azịza ndị ka mma